အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: November 2013
ကမ္ဘာကျော်Khan Academy မြန်မာပြန် ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွက် ဘာသာပြန်သူများ Volunteer လုပ်နိုင် တော်တော်ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးလေးပါ။ Online သင်ခန်းစာများကို ပို့ချနေသော ကမ္ဘာကျော် Khan Academy Website အားမြန်မာဘာသာ ဖြင့် လွှင့် တင်ထားပြီး အဆိုပါ Web Site တွင် မူရင်း ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများ ကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကာ တင်ဆက်ထားသည်။ ပညာရပ်နယ်ပယ်ပေါင်းစုံအတွက် ထုတ်လွှင့်ထားသော ဗီဒီယိုဖိုင်သင် ခန်းစာများအားလုံးကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် ပြန်ဆိုဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက် Volunteer များအဖြစ်လုပ်ကိုင်လိုသူများ ဆက်သွယ် နိုင်ကာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ ယခုအခါမှာ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို မြန်မာ ဘာသာပြန် ဖြင့် အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်နေပြီဖြစ်ကာ မကြာမီမှာ DVD များကို အခ မဲ့ဖြန့်ဝေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပြီး မြန်မာဘာသာပြန် Online သင်ခန်းစာများကို ကြည့်ရှုလိုပါက http://www.khanacademyburmese.org တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါသည်။မြန်မာ့ပညာရေးတိုးတက်ဖို့အတွက် တစ်တပ်တစ်အားဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေဖို့ Tech Space ဝိုင်းတော်သားများက ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။ ------------------
Posted by Wai Lin Aung at 4:15 PM
ဟား ဟား ဟား ..ရယ်လိုက်ရတာ အူပါနာတယ်...သူငယ်ချင်းတို့ လဲ ရယ်ရအောင် ဘာသာပြန်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...ခိခိခိ ============ တာလီဘန် အစ္စလမ်မစ် စစ်သွေးကြွအဖွဲ့ မှ အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲဖို့ လွတ်လိုက်တဲ့ အကြမ်းဖက်သမား အဇာစ် ရှဟစ်ဒူလာ (Aezid Shahidullah) ဟာ သူ့ ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန် မစ နိုင်ခင်မှာပဲ ရဲကအချိန်မှီ ဖမ်းဆီးခြင်း နိုင်ခဲ့ပါတယ်...ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ တစ်ကိုယ်လုံး ပေါက်ကွဲအားပြင်းထန်တဲ့ ဗုံးတွေအပြည့်တပ်ဆင်ထားပေမဲ့ သူ့ ရဲ့ ငယ်ပါ (penis)ကို ဗုံးဒါဏ်ခံနုိုင်တဲ့ သတ္တုတစ်မျိုးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစွပ်နဲ့ ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ထားပါတယ်...ရဲအရာရှိက ဘာကြောင့် ဒီလိုဖုံးအုပ်ကာကွယ်ထား ပါသလဲလို့ ပေးတော့... အဇာစ် ရှဟစ်ဒူလာ (Aezid Shahidullah) က ကျွန်တော့ခန္ဓာကိုယ် တစ်စီဖြစ်သွားတဲ့အခါ ငယ်ပါ(penis)ကိုတော့ အထိခိုက်မရှိ အကောင်းပကတိ ကျန်ခဲ့စေချင်လို့ ပါ...ဒါမှ သေလွန်ပြီးနောက် ကောင်းကင်ဘုံမှာ အပျိုစင် ၇၂ ယောက်နဲ့ ပျော်ပါးတဲ့အခါ အဆင်ပြေအောင်လို့ ပါ...ဒိပြင်တခြားရည်ရွယ်ချက်တော့ မရှိပါဘူး ဟုဖြေကြားသွားခဲ့ပါတယ်...။ Failed taliban suicide bomber Aezid Shahidullah was arrested and searched by police. Then metal was found around his penis asaprotection. Searching officers asked the purpose, his response was: He wanted to keep his penis safe after he blew himself up, for not having any sexual problems while to meet those 72 god damn virgins in heaven. ALLAHU AKBAR!!!
Posted by Wai Lin Aung at 4:09 PM
လူဗိုလ်ဟူသည် ...: ဦးရွှေမန်းရဲ့ အမှားတော်ပုံများ: Ye Yint Nge Darron Humiston ၂၀၁၂ ဧပြီလ (၁၁) ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးေ ကာက်ပွဲ မတိုင်မီ ဖေဖော်ဝါရီလကုန်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ...
Posted by Wai Lin Aung at 8:24 AM
အဂတိလိုက်စားခြင်း(သို့) လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ(သို့) အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်း(သို့) ဂါရ၀
November 25, 2013 at 9:29am
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုဖြင့် ကြွယ်ဝ ချမ်းသာလာခြင်း ဆိုသည်မှာ ရာထူးဆိုင်ရာ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရာမှ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုဖြင့် ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများ တိုးပွားရရှိလာခြင်းကြောင့် သော် လည်းကောင်း၊ ပေးရန်တာဝန်များ လျှော့ချခြင်းကြောင့်သော် လည်းကောင်း၊ ငွေကြေးနှင့် ပစ္စည်းများကို မတရားရယူ ခြင်းကြောင့် သော်လည်းကောင်း ကြွယ်ဝ ချမ်းသာလာခြင်းကိုဆိုသည်။(အဂတိလိုက်စားမူ တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ)
ဆင်တစ်ကောင်လုံးတွေ့နေသဖြင့် ဆင်ခြေရာရှာရန် မလိုအပ်ပါချေ။ ဆင်ခြေရာ မမြင်သဖြင့် ဆင် မဟုတ်တန်ရာဟူ၍ ငြင်းဆိုခြင်းအပေါ်ကန့်ကွက်လိုပါသည်။ မည်သည့်နေရာ တွင် မည်သူက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ပေးသည်ကို ရှာဖွေရန် မလိုအပ်ပါ ။
( မေး ။ ။ Were there moments where you thought may be the choice, or the sacrifice is not worth it ? I miss my children so much.
ဖြေ ။ ။ No, I never thought that it is not worth it. I always used to think that if only one other person in Burma who wanted democracy, I would remain. )
ကိုယ်ဘာသာပြန်ထားတာက ဒီလိုပါ ။
( မေး ။ ။ အနစ်နာခံခဲ့မှု သို့မဟုတ် ဒီရွေးချယ်ချက်တွေဟာ မတန်ဘူးလို့များ တွေးမိတာမျိုး ရှိဖူးသလား ။ ဥပမာ '' ငါ့သားလေးတွေကို လွမ်းလိုက်တာ '' ဆိုတာမျိုးပေါ့ ။
Posted by Wai Lin Aung at 7:49 AM
အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါ ( Grammar ) သုံးစွဲပုံ
Past continuous tense အသုံးပုံစံကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်
Simple Past နဲ့တွဲသုံးပါတယ်.......ဥပမာ...မနေ့က နေ့လည်
၁ နာရီကနေ သုံးနာရီထိ မောင်ဘနဲ့ မောင်လှ ချက်ထိုးနေကြတယ်
ဒါဆို နေ့လည် ၂ နာရီမှာ သူတို့ဘာလုပ်နေတုန်းလဲ....( ချက်ထိုး
နေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ် ) ဒီလိုအခြေနေမှာသုံးပါတယ်....တကယ်
လို့ ညနေ ၄ နာရီဆိုရင်တော့ ချက်ထိုးလို့ပြီးသွားပြီ....ဒါလိုဟာမျိုး
မှာ Past Perfect Tense ကိုသုံးပါတယ်။
When I got my home, my father was watching the TV.
( ကျနော်အိမ်ပြန်ရောက်တော့...အဖေက ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်နေတုန်း )
Posted by Wai Lin Aung at 7:46 AM
အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: EX - ABSDF: တရားဥပဒေ စိုးမိုးခြင်း လုံးဝမရှိသော နိ...
အဖိနှိပ်ခံတို့ အသံ: EX - ABSDF: တရားဥပဒေ စိုးမိုးခြင်း လုံးဝမရှိသော နိ...: EX - ABSDF: တရားဥပဒေ စိုးမိုးခြင်း လုံးဝမရှိသော နိုင်ငံ (၁) : Aung Hein November 23, 2013 at 5:20pm (က) နိဒါန်း အဂတိလိ...
Posted by Wai Lin Aung at 5:28 AM
Posted by Wai Lin Aung at 4:53 AM
ရက်စွဲ ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လ ၂ ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ လယ်မြေကို လယ်နီးချင်းဖြစ်သူ ဦးသောင်းညိုမင်းမှ မတရား အဆင့်ဆင့် သိမ်းပိုက်ထားခြင်းကိစ္စ။
အထက်ပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်ဦးသိန်းလှ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် (စီဇက်အန် - ၁၁၂၂၉၇)နှင့် ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးတိုး (ကွယ်လွန်) သည် ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၉)ရက်နေ့တွင် ဦးစိုးတင့် (နိုင်ငံတော်ထံမှ လယ်ဧက - ၅၀၀ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသူ)ထံမှ၊ ညောင်တုန်းကျွန်း၊ ကွင်းအမှတ် - ၃၆၄ (ဂ)၊ ၃၆၅ (ဂ) ကျွန်းဦးခေတ္တိရလယ်မြေဧက (၅၀)ကို လယ်မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် စာချုပ် (ပူးတွဲ-၁)အရ လွှဲပြောင်းရယူ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသည်။
Posted by Wai Lin Aung at 8:53 PM